Asinyamezeleki isimo semfundo - HeraldLIVE
The Algoa Sun Asinyamezeleki isimo semfundo January 25, 2014
NJENGOKO siyishiya inyanga yolutsha apha eMzantsi Afrika, ndizibhaqa ndicinga ngolutsha luka-1976 nendlela elwalomelele ngayo.
Sikwazi ukuhlala sonwabele usuku lwesikhumbuzo se-Soweto Uprisings nje kuba lamagorha ela xesha awazange asonge izandla anyamezele ukufundiswa ngesiBhulu.
Ukuba ibisengu-1976, abafundi babengasoze bayimele lemeko ikuyo imfundo namhlanje.
Ngekukudala banyusa amadolo phezulu, baqhway’ uqhushululu besilwela amalungelo abo.
Ngebengayinyamezelanga into yokulinda de kube sesiphakathini sonyaka phambi kokuba bafumane iincwadi. Ngebaxhaph’ amagwebu kwinto yokuba phambi KOKUBA kufunyanwe isidlo esikolweni okanye iinqwelo eziya esikolweni kufuneke kuquqwe kubuyelelwa enkundleni yamatyala.
Xa sijonga umba osemilonyeni ntsukunje weencwadi ezingekathunyelwa kwizikolo zaseLimpopo, njengommi waseMpuma Koloni ndizibuze kutheni abantu bothukile.
Apha ephondweni yinto eyenzeka mihla nezolo kodwa ayiphakanyelwa ngendlela ephakanyelwe ngayo e-Limpopo.
Ngoku sekunceda amaphulo afana ne-Section 27 neLegal Resources Centre ukuthatha inxaxheba yokulwelwa amalungelo abafundi.
Kufuneka kude kuthini ukuze urhulumente awuthathele ingqalelo umba wezemfundo, ingakumbi eyabafundi abamnyama abasaxhomekeke kwizikolo zikarhulumente? Kunyanzelekile abafundi baphakame balwele amalungelo abo ngendlela benza ngayo ooTsietsi Mashinini nooMbuyisa Makhubo, kude kubekho abafayo njengo-Hector Pieterson?
Yintoni le ekufuneka yenziwe, kwaye kufuneka yenziwe ngubani ukuze abaphathi bezemfundo bajik’izinto ukuze kuqinisekiswe impumelelo yabantwana?